As of Sat, 08 Aug, 2020 17:10
धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षारतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षरता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । बोर्डले दि अर्गनाइजेसन फर इकोनमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) अन्तर्गतको इन्टरनेसनल नेटवर्क अन फाइनान्सिएल एजुकेसन ( आइएनएफ) को सहकार्यमा पुँजी बजारमा वित्तीय साक्षरता सम्मेलन गर्ने भएको हो ।
सातामा अढाइ अर्बको सेयर कारोबार
धितोपत्र बजारमा यस साता पनि उतारचढावपूर्ण कारोबार भयो । अघिल्लो बिहीबार अर्थात् असार ५ गते १ हजार २६४.३६ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक यस साताको अन्तिम दिन असार १२ गते १ हजार २५७.१५ अंकमा पुगेर बजार बन्द भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताभर २ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख ५७ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँमा ७६ लाख ७२ हजार ५ सय ६४ कित्ता सेयर कारोबार भए ।
धितोपत्र दलाल कम्पनीमाथि कडाइ
धितोपत्र दलाल कम्पनीले एक दिनमा वा एकै पटक १० लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका पूर्णकार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि १० लाखमाथिको कारोबार विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने भएको हो ।
देशको अर्थतन्त्रको करिब ५० प्रतिशत सेयर मार्केट
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउतले अनलाइन सिस्टमा जादा सेयर कारोबार गर्नुभन्दा पहिले नै २५ प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले केही सेयर लगानी कर्ताले अझै पनि अनलाइनमा नगएको बताएका छन् ।
बिहिवार, असार ५, २०७६
स्टक डिलर सञ्चालन अन्तिम चरणमा
नेपला धितोपत्र बोर्डले स्टक डिलरको काम छिट्टै सुरु गराउने भएको छ । बोर्डले सेयर बजारमा धितोपत्रको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि स्टक डिलरको आवश्यकता औंल्याउदै अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा बोर्ड अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले स्टक डिलरको अनुमति दिने काम अघि बढेको जानकारी दिएका हुन् ।
सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–२ को असार ७ सम्म बिक्री खुला हुने
सिटिजन्स म्युचुअल फन्डले एक अर्ब रुपैयाँबराबरको दोस्रो योजनाको एकाइ खरिद गर्ने असार ७ गतेसम्म बिक्री खुला रहने जनाएको छ । जेठ ९ देखि बिक्री खुला गरेको छिटोमा बिक्री बन्द हुने समयमा पूर्ण बिक्री नभए पनि असार ७ सम्म बिक्री खुला गरेको हो ।
आइतवार, जेठ २६, २०७६
सेयर बजारमा महिलाका लागि लाभकर घटाउन अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव
सेयर बजारमा महिलाका लागि लाभकर घटाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्ताव गरेका छन् । शनिबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै खतिवडाले धितोपत्र बोर्डबाट महिलालाई लाभकरमा घटाउने प्रस्ताव आए आफू निकै सकारात्मक हुने बताएका हुन् ।
बिहिवार, जेठ २३, २०७६
हिमालयन हाइड्रोको आईपीओ निष्कासनमा जनता क्यापिटल
हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्न जनता क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । हिमालयन हाइड्रोले १ सय रुपैयाँ अंकित दरको २२ लाख ५० हजार कित्ताको २२ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको भन्दै यसमध्ये ९ लाख कित्ताको ९ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर परियोजना प्रभावित स्थानीय क्षेत्रहरूको लागि छुट्याइएको जनाएको छ ।
बिहिवार, जेठ १६, २०७६
सरकारी ऋणपत्र कारोबार अनलाइन प्रणाली बनाइने
धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको पनि अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल स्थिर रहेको ऋणपत्र बजारलाई सुरक्षित र चलायमान विद्युतीय प्रणालीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रका दोस्रो बजार कारोबार विद्युत्तीय प्रणालीमार्फत गर्न विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने जनाएको छ ।
दाङको घोराहीमा आर्यतारा सेक्युरिटिजको शाखा
आर्यतार इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजले दाङको घोराहीस्थित न्युरोडमा दोस्रो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्टक ब्रोकर ५७ ले दाङका सर्वसाधारणलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने लक्ष्यसहित शाखा विस्तार गरिएको जनाएको छ । शाखा विस्तार भएसँगै बजारमा लगानीकर्ताको संख्यासमेत बढ्ने विश्वास आर्यताराले लिएको छ । एक कार्यक्रमकाबीच घोराही उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसाल र आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजका अध्यक्ष भरतप्रसाद नेपालले नयाँ शाखाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।
सेयर बजारमा सट्टेवाज हावी
सेयर बजारमा सट्टेवाज हावी भएपछि अस्वाभाविक उतारचढाव देखिन थालेको छ । सट्टेवाजले बजार चलाउन थालेपछि साना तथा नयाँ लगानीकर्तामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । पछिल्ला केही साता उच्च अंकले बढेको सेयर बजारमा गत साताको मध्यदेखि करेक्सन सुरु भएको थियो । चार दिन निरन्तर घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचक सोमबार पुनः करिब २२ अंकले वढेको छ । यो साताको पहिलो दिन आइतबार १६ अंकले घटेको नेप्से सोमबार बढे पनि लगानीकर्ता बजारको दिशाप्रति अन्योलमै छन् । बजारमा देखिएको बुलिस र बियरिस प्रवृत्तिमा उच्च अंकको रहेको हुनाले लगानीकर्ता लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।
एनआईबीएल क्यापिटलले ५० करोडको खुलामुखी योजना ल्याउने
एनआईबीएल एस क्यापिटलले सामूहिक लगानी कोषको खुलामुखी योजना सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्यापिटललाई ५० करोड रूपैयाँ बरावरको खुलामुखी योजना सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो ।
अधिकांश सूचीकृत कम्पनी कमजोर
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गर्ने सूचीकृत कम्पनीको नयाँ व्यवस्थाअनुसार वर्गीकरण गर्दा अधिकांश कम्पनी कमजोर देखिएका छन् । नेप्सेको वर्गीकरणअनुसार २ वटा कम्पनी मात्रै ए वर्गमा परेपछि अधिकांश सूचीकृत कम्पनी कमजोर देखिएका हुन् । नेप्सेले लगानीकर्तालाई लगानीको निर्णय लिन सहयोग होस् भनेर वर्गीकरण गरे पनि नयाँ व्यवस्थामा क वर्गका परेका कम्पनीभन्दा राम्रो कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत छन् ।
हिमालय ऊर्जाको सेयर बाँडफाँड
हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले सर्वसाधारणतर्फको सेयर मंगलबार बाँडफाँड गरेको छ । रामेछाप र दोलखाको सीमानामा निर्माणाधीन १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती र ७ मेगावाटको अपर खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमालय ऊर्जाले निष्कासन गरेको सर्वसाधारणतर्फको सेयर बाँडफाँड गरेको हो । ६९ हजार ६ सय ७० जना आवेदकले १० र २० कित्ता सेयर पाएको कम्पनीका सञ्चालक भीम न्यौपानेले जानकारी दिए ।